देजन कुलसेभस्की बाल्यकाल कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
Perr Schuurs बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य
Jannik Vestergaard बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्य
डेनियल पोडेंस बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
Benrahma बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू भने
लसिना टोरोर बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
घर अफ्रिकी फुटबल स्टोरीहरू सेनेगालिस फुटबल खेलाडीहरू इस्माइला सर बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य
एलबीले फुल स्टोरीको फुटबल प्रतिभाशाली प्रस्तुत गर्दछ उपनाम "इस्मा“। हाम्रो इस्माइला सर बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू तपाईंको बाल्यकालको समयदेखि आजको दिनसम्म तपाईंलाई उल्लेखनीय घटनाहरूको पूर्ण खातामा ल्याउँदछ।
प्रारम्भिक जीवन र इस्माइला सरको उदय। छवि क्रेडिटहरू: मिक्सअर्टिकल, मिस्टरस्काउट, ट्रान्सफरमार्केट र डकारबज
हो, सबैलाई थाहा छ कि उसले गति, ट्रिक्री पायो र ठूला गोलहरू गर्न सक्दछ - एक उत्तम फिफा फरवार्डको लागि एक शर्त। जहाँसम्म, केवल केही हात प्रशंसकहरूले इस्माइला सररको जीवनी विचार गर्दछ जुन निकै चाखलाग्दो छ। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
इस्माइला सर बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - प्रारम्भिक जीवन र पारिवारिक पृष्ठभूमि
इस्माला सरार फेब्रुअरी १ ​​25 1998 XNUMX को २th तारिखमा उनकी आमा, मारिएमे बा र बुबा, अब्दुलाय सर नार गाडको उत्तर पश्चिम तटीय शहर सेन्ट लुइस, सेनेगलमा जन्म भएको थियो।
इस्माइला सरको जन्म सहर, सेन्ट लुइस (स्थापना १ 1659 XNUMX।) पश्चिमी अफ्रिकी तटमा सबैभन्दा पुरानो औपनिवेशिक शहरहरू मध्ये एक मानिन्छ, जसलाई कहिलेकाँही पश्चिम अफ्रिकाको फ्रान्सेली मुख्यालय पनि भनिन्छ। तल पश्चिमी अफ्रिकी समुद्री तटको दृश्य छ जहाँ इस्माइला सरारको परिवारको जरा छ।
इस्माइला सररको परिवार जूट्स-सेन्ट-लुइस, सेनेगल चिन्ने छवि क्रेडिट: विकिपेडिया
इस्माइला सर शुरुआती वर्षहरु: अफ्रिकी परिवारको मूलबाट द्रुत फुटबलरले आफ्नो वर्षको प्रारम्भिक अंश सेन्ट लुइसमा बिताए। उहाँ आफ्ना आमाबुबाका चार भाइबहिनीसँगै हुर्कनुभयो; पापीस, किना, एनडिए अमी र बडारा.
इस्माइला सर एक उच्च मध्यम-वर्ग पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट हुन् जो उनका बुवा द्वारा संचालित थिए जो एक पूर्व फुटबलर थिए। तपाईंलाई थाँहा थियो?… इस्माइला सरका बुबा, अदुउलाय सर नार गाड एक पूर्व सेनेगाली अन्तर्राष्ट्रिय थिए जसले African० को दशकको उत्तरार्धमा पश्चिम अफ्रिकी देशको लागि खेले। निहित द्वारा यो तथ्य भनेको आफ्नो बुवाको लागि परिवारमा फुटबल रनको लागि धन्यवाद छ।
इस्माइला सर बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - शिक्षा र क्यारियर बिल्डअप
फुटबलबाट सेवानिवृत्ति भएको २० भन्दा बढी बर्ष पछि, अब्दुल्ले सर नार गाडलाई अन्य जागिरमा जान र सेवानिवृत्तिसँग व्यवहार गर्न निकै सजिलो भयो। सुपर बुवाले चरनको बावजुद फुटबल मैदानहरू त्यो दृश्यमा समात्नुभयो उनका छोराहरूले फुटबलको लागि उनीहरूको शिक्षामा सम्झौता गर्नु हुँदैन। प्रारम्भमा, उनले इस्माइला सर सहित आफ्ना बच्चाहरूको नाम दर्ता गरे Oumar Syr डायग्न स्कूल सेन्ट लुइस, सेनेगल मा अवस्थित।
विद्यालयको लागि घृणा: इस्माइला सरले स्कूललाई ​​घृणा गर्छिन् र उनलाई स्कूल पठाउने उनका बाबुको निर्णयमा खुशी भएन। वास्तवमा, स्कूल पुस्तकहरू पढ्नु भनेको त्यस्तो कुरा थिएन र उहाँलाई आफ्नो छिमेकीमा चिन्ने धेरैलाई, स्कूलमा पढ्नु औपचारिकता मात्र देखिन्थ्यो। प्रायः अवसरहरूमा, साथीहरूसँग फुटबल खेल्ने क्रममा ऊ स्कूल छोड्नेछ।
इस्माइला सरका अभिभावकहरूले आफ्ना स्कूलका शिक्षकहरूबाट धेरै नराम्रो रिपोर्टहरू प्राप्त गरे र उनीहरू आफैले यो कार्य देखेर उनीहरूले आफ्नो छोरालाई कारबाही गर्ने निर्णय गरे। तिनीहरूले उसलाई स्कूल रोक्न लगाए र जबरजस्ती उहाँलाई एमा लगे मास्टर दर्जी उसको छिमेकमा ऊ टेलरिंग सिक्न सक्छ (एक दर्जी को गतिविधि वा व्यापार).
कुनै पनि राम्रो प्रशिक्षु जस्तै, इस्माइला सरार टेलरिंगको आधारभूत चीजहरू सिक्न पर्याप्त विनम्र थिइन्, जुन उनले लगनशील तरिकाले गरे। तर, उनको फुटबल विवेक उसलाई आफ्नो मालिकको सेवा जारी राख्न अनुमति दिन सकेन। सरल शब्दमा भन्नुपर्दा, उनको मुटु फुटबल चाहन्थ्यो। अन्त्यमा, बहादुर केटाले आफ्नो मनलाई पछ्यायो जब उसले सिलाइ छोड्छ र जबरजस्ती उसको अनुकुल जीवन बिताउन थाल्छ, आफ्ना अभिभावकको स्वीकृति बिना।
इस्माइला सर बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - प्रारम्भिक क्यारियर लाइफ
इस्माइला सरले आफ्नो fifth औं वर्षमा ओमर सिर डायग्न स्कूलमा स्नातक गरेकी हुनु अघि उनले कारण त्यागेर एएस ज्युनेरेशन फुटका साथ ट्रायलका लागि भर्ना गरे। एक सफल परीक्षण पछि, जवान केटा फुटबल कक्षा को लागी दर्ता भयो।
AS Gilanération फुट मा इस्माइला सर परिचय पत्र। क्रेडिट: Alchetron
इस्माइला सर सार्डियो माडेको जस्तै एकेडेमीमा शुरू भयो। ऊ ए एस ज्युनेरेशन फूटमा पेशाको आधारभूत कुराहरू सिके किनभने उसले हरेक दिन मेरो पेशाको राम्रो प्रयोग गर्ने मौकाको रूपमा खोज्यो। उसले क्लब दोस्रो प्रगतिबाट सेनेगालीस लिगको शीर्ष उडानमा प्रगति गर्नमा मद्दत गर्‍यो। फुटबल प्रति उनको ठूलो चासो र उत्साह उसले यूरोप जाने सपना देख्यो।
इस्माइला सर बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - सडकको प्रसिद्धि
धेरै फुटबलरहरू जस्तै जो देशबाट बाहिर युरोपमा खेल्न भाग्यशाली छन्, अक्सर गन्तव्य तिनीहरूको फ्रेंच कोलोन-फ्रान्स हो। वर्ष २०१ 2016 मा इस्माइलाले आफ्नो परिवारलाई पछाडि छोडेको थियो र एफसी मेटजसँग उसको पहिलो व्यावसायिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो।
युवा इस्माइलाले आफ्नो देश छाडे र विदेशी भूमिमा कहिल्यै खेलेका थिएनन, मैले नयाँ वातावरण अनुकूल गर्नु पर्‍यो। प्रभाव पार्नु पर्ने आवश्यकताका कारण, सरर आवर्ती चोटपटकबाट ग्रस्त भयो, धेरै व्यस्तताका कारण यस क्षेत्रमा व्यस्तता जो अक्सर उसको शारीरिक गल्तीहरूको कारण हुन्छ। बारम्बार घाइते हुनु उनको परिवारलाई उनको क्यारियरको लागि डर लाग्यो। यो गम्भीर भयो कि सरको बुबाले हस्तक्षेप गर्नुपर्‍यो। फुटबलरका अनुसार;
“मेरो बुबाले पनि मलाई अक्सर खेल्ने गर्नुहुन्थ्यो, मलाई खेल्ने तरिका परिवर्तन गर्न भनेर चिच्याउनुहुन्थ्यो। तर मैले यो सहयोग गर्न सकिन। म संघर्ष र मेरो विपक्षमा संलग्न गरिरहें जबसम्म म शक्तिशाली र चोटपटकको लागि अधिक प्रतिरोधात्मक नभएसम्म "
इस्माइला सरको एफसी मेट्जको प्रगतिले उनलाई उनको देशको राष्ट्रिय टोलीले बोलाएको देख्यो - उनको लागि एक सपना साकार भएको थियो। उसको राष्ट्रिय टोलीले बोलाउँदा उसको जीवनको सब भन्दा ठूलो झटका लाग्यो। तपाईंलाई थाँहा थियो?… इस्माइला सर सार्न स्पेनमा गएर ठूलो बार्सिलोनामा सामेल हुन सक्छिन्। आशाजनक फुटबलरले बार्सिलोनालाई दावी गरे कि यो आफ्नो क्यारियरको लागि एकदम चाँडो थियो। के सरर त्यो राम्रो कुरा हो जसलाई स्पेनी जाइन्टले बोलाउँथे?। तलको भिडियोले वर्णन गर्दछ कि ऊ किन एफसी बार्सिलोना द्वारा कल योग्य थियो। उसको लक्ष्य केहि हाइलाइटहरू हेर्नुहोस्।
इस्माइला सर बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - प्रसिद्धि उठाउनुहोस्
इस्माइला सरले बार्सिलोनालाई बेवास्ता गरे रेनेमा सामेल हुन जहाँ उसले आफ्नो महान गोल स्कोरि great फर्म (उनका केही गोलहरू) माथिको भिडियोमा देखाइएको अनुसार जारी राख्यो। यो उपलब्धीले उनलाई २०१ F फिफा वर्ल्ड कपको सेनेगाली टीममा नामाकरण भएको देख्यो।
रेन्नेसमा हुँदा, इस्माइला सरले सदियो मानेको भिडियोहरू हेर्न सुरू गरे - आफ्ना त्वरणहरू, उनको ड्राईबलिंग र गोलहरू। १ December डिसेम्बर २०१ 13 मा, सार गोलले रेनेसलाई २०१–-१– यूईएफए यूरोपा लिग नकआउट चरणमा आफ्नो स्थान फिर्ता गर्न मद्दत पुर्‍यायो। सीजनको यूईएफए यूरोपा लिग गोल पुरस्कृत (माथिको भिडियोमा पहिलो गोल देखाइएको छ) २०१–-१– ले क्लबहरू हस्ताक्षरको लागि पीछा गर्दै गरेको देखे।
August अगस्ट २०१ On मा, सारार एक क्लब रेकर्ड ट्रान्सफर शुल्कमा प्रिमियर लिग क्लब, वाटफोर्डमा सामेल भए। उसको प्रीमियर लिग दृश्यमा आएको देखि, त्यहाँ छ दुबै फिफा गेमरहरू र वाटफोर्ड प्रशंसकहरूको लागि थोरै अतिरिक्त रोमान्स हुन सके जो उनको इस्माइला सरको गति र ट्रिक्रीबाट एकदम प्रभावित छन्। लेखेको समयमा, वाटको फ्रिज शर्टमा सररको स्टन्डआउट क्षण युनाइटेड बिरूद्धको खेलमा थियो जहाँ उनले भोलि गोल गरे र पेनल्टीले गर्दा उनको टीमले युनाइटेडलाई २-० ले हरायो।
निस्सन्देह, इस्माइला सरले विश्वमा प्रमाणित गरिसक्यो कि उहाँ आफ्नो सेनेगाली पुस्ताको अर्को सुन्दर प्रतिज्ञाहरू हुनुहुन्छ। Sadio मनी. बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, इतिहास हो।
इस्माइला सर बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - सम्बन्ध जीवन
उनको प्रसिद्धिमा र प्रिमियर लिगको अपेक्षाप्रति बढ्दै, यो निश्चित छ कि केही प्रशंसकहरूले इस्माइला सर की प्रेमिका छ कि छैन भनेर सोच्न थालेको हुनुपर्छ वा ऊ वास्तवमै विवाहित छ भने।
सत्य यो हो कि त्यहाँ यस तथ्यलाई इन्कार गर्न सकिंदैन कि उसको अग्लो सुन्दर दृश्य, आकर्षक अनुहार, मुटु-पग्लेको मुस्कान र सफलताको साथ एक फुटबलरले उसलाई सम्भावित प्रेमिका र पत्नी सामग्रीहरूको इच्छा सूचीमा राख्दैन। जहाँसम्म, सफल फुटबलर पछाडि, एक ग्लैमरस प्रेमिका छ जो इस्माइला सरारको भाग्यशाली पत्नी बन्न पुग्यो। तल इस्माइला सर र उनको श्रीमतीको फोटो छ जो अनुसार डाकारबज् नाम फ्याट Sy मा जान्छ।
इस्माइला सरार पत्नीलाई भेट्नुहोस्। छवि क्रेडिट: डाकारबज्
इस्माइला सरले एकदम कलिलो उमेरमा विवाह गर्ने निर्णय लिइन्। आफ्नी श्रीमतीबाट पाएको सहयोगको बारेमा बोल्दै, इस्माइलाले एक पटक डाकारबजसँग अन्तर्वार्तामा भनेकी थिइन;
“फ्याट साईले मलाई धेरै समर्थन गर्यो, मैले यसलाई पेशेवर खेलाडी बनाएको धेरै समय अघि। मेरो क्यारियर योजनामा ​​उनले धेरै योगदान पुर्‍याइन् किनभने उनी एक हुन् जसले मेरो आहार, मेरो घण्टाको प्रशिक्षण र आराम गर्ने काम गर्दछन्। म चाँडै नै बिहे गर्न चाहन्थें, स्थिरता पाएँ किनकि फुटबल खेलाडीहरूको लागि प्रलोभनहरू ठूलो हुन्छ। ”
तलको भिडियोले ईस्माइला सरले आफ्नी पत्नी फ्याट साईको लागि गहिरो प्रेमको सार दिन्छ। साथी वास्तवमै उनले एउटा धेरै कलिलो उमेरमा विवाह गरेको एक मुख्य कारण हो।
इस्माइला सर बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - व्यक्तिगत जीवन
इस्माइला सरको व्यक्तिगत जीवन फूटबलदेखि टाढा जान्न तपाईको व्यक्तित्वको पूर्ण तस्वीर प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।
इस्माइला सेर व्यक्तिगत जीवनलाई चिन्न
सुरू गरेर, हामी समयमै बस्नको लागि आफ्नो निर्णयबाट सुरु गर्दछौं। इस्माइला सर कसैले त्यस्तो विश्वास गर्छिन् कि कुनै पनि सम्भावित युवा जो स्थिर क्यारियर लिन चाहन्छ उसले छिटो विवाह गर्ने प्रयास गर्नु पर्दछ। यसको आवश्यक छ कि जससँग आफ्नो क्यारियर बिगार्न सक्ने मामिलाहरू हुने प्रलोभनहरूदेखि जोगिन।
दोस्रो, ऊ त्यस्तो व्यक्ति हो जसले जीवनको लागि विधवागत दृष्टिकोण अपनाउँछ। सरर चीजहरू जबरजस्ती गर्न प्रयोग गर्दैन, सही कुरा ठीक समयमा आउँछ भन्ने विश्वास गर्दै। उसले चीजहरू आफ्नै गतिमा पूरा गर्न पनि रुचाउँछ।
अन्तमा, आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा, इस्माइला सरले लेखेको समयमा विश्वास गर्दैनन्।ट्याटु संस्कृति'आजको फुटबल विश्वमा धेरै लोकप्रिय छ। ऊ आफ्नो मस्जिदमा आफ्नो धर्म चित्रण गर्दछ र आफ्नो परिवारको प्रेम हृदय मा राख्छ र ट्याटू मा आफ्नो शरीर मा छैन।
इस्माइला सर बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - पारिवारिक जीवन
प्रारम्भिक झगडाको बाबजुद, इस्माइला सरका अभिभावकहरू खुशी भए कि उनीहरूले आफ्नो छोरालाई उनको अनुकम्पा अनुसरण गर्न दिए जुन वास्तवमा उसले पाएको छ। टेलरिंग पेशाको अभ्यासले उसको क्यारियरमा उसलाई अझै मद्दत पुर्‍यायो। सरका अनुसार;
"टेलरिंग पेसा छोडेर पनि म आफ्नो मास्टर दर्जीसँग सम्पर्कमा रहें र आज उहाँ मेरो परिवारको फेसन डिजाइनर बन्नुभयो।"
फ्रान्स भ्रमण गर्नु अघि, इस्माइलाले विशेष गरी उनीहरूको लागि गरेका त्यागहरूको लागि आफ्ना आमा-बुबालाई गर्व गर्ने कसम खाए। यो उनका बुबा अब्दुउले सर नार गाडलाई फुटबलबाट अवकाश लिने समस्या हो। आज, उहाँ फेरि आफ्नो सपनाहरु जीवित भएकोमा खुसी हुनुहुन्छ।
इस्माइला सरका भाई बहिनीहरूको बारेमा: इस्माइलाका अनुसार सरर आफ्ना चार जना भाइबहिनीसँग हुर्केका थिए। उसको एक भाई छ जसको नाम पापीस सरर छ र उसले आफ्नो क्यारियर सल्लाहकारको जस्तो काम गर्छ र किनी नामकी बहिनी पनि छ, जो उनको दोस्रो आमा जस्तो छ। उनका अर्को भाइबहिनीको नाम एनडिए अमी छ र कान्छो कवच भने बडारा हो।
इस्माइला सर बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - जीवन शैली
इस्माइला सरको जीवनशैलीमा धेरै अनुसन्धान पछि, हामी बुझ्छौं कि उनी एक साधारण मान्छे हो जसले पक्रिराखेको छ व्यावहारिक आवश्यकताहरू कि अधिक लागत छैन। तल उसको देशवासी चेइखौ कौयतासँग फुटबलर छ र उनीहरूको पछाडि कारको स्वामित्वको बारेमा थोरै थाहा छ।
इस्माइला सरको जीवनशैली चिन्न। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम र डेलीरकार्ड
व्यावहारिकता र रमाईलोको बीचमा निर्णय गर्नु वर्तमान इस्माइला सरका लागि गाह्रो विकल्प होईन। लेखेको समयमा सरार विदेशी कारहरू, ठूला हवेलीहरू फ्लान्टिंग गरेको देखिएको छैन जुन फुटबलरहरूले सजिलैसँग सजिलैसँग देख्न सक्ने छन् जो तेजस्वी जीवनशैली जीउँछन्।
इस्माइला सर बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - अनियमित तथ्यहरू
उनले एक पटक सँगै काम गरे Sadio मनी परोपकार: इस्माइला सर एक फुटबलर हो जसले मैदानमा मात्र सेनगालिस समाजमा पनि चम्किन्छ। तलको फोटोमा ऊ सँगसँगै काम गरिरहेको छ Sadio मनी परोपकारी कारणहरूमा, किनकि उनीहरूले सबैभन्दा वञ्चितलाई मद्दत गर्छन्।
इस्माइला सरले आफ्ना जनतालाई फिर्ता तिर्छिन्। छवि क्रेडिट: Instagra,
उहाँको पेस र ड्राईबल- फिफा गेमरहरूको लागि एउटा आशीर्वाद: फिफामा, कसैलाई पनि ढिलो खेलाडीहरूको पक्षमा लाग्दैन। पेस भएको खेलाडी प्रयोग गर्नु एक पूर्व शर्त हो कि तपाईं आक्रमण गर्दै हुनुहुन्छ वा आक्रमणकारीलाई पीछा गर्दै हुनुहुन्छ। लेख्ने समयमा २१ बर्षको उमेर भएका फिफा गेमरहरूको लागि आशीर्वाद हो जब यो गति र ड्रिबलिंग क्षमताको कुरा आउँछ।
आफ्नो उमेर को लागी, इस्माइला सरर पेस र ड्राईबल फिफा गेमरहरु को लागी एक आशीर्वाद हो। छवि क्रेडिट: SoFIFA, FutHead र GoonerNews
तपाईंलाई थाँहा थियो?… २०१ Sad अफ्रिका कप अफ नेशन्समा सार्डिको २ than भन्दा बढी सदिओ मानेले मात्र सफल ड्राईबल्स बनाए।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो इस्माइला सर बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्या reading्कहरू पढ्नका लागि धन्यबाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताका लागि प्रयास गर्दछौं। यदि तपाइँले केहि राम्रो देख्नुहुन्न भने, कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी तपाईका विचारहरुलाई सँधै मूल्य दिन्छौं र सम्मान गर्छौं।
Sadio मनी बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
परिमार्जित मिति: नोभेम्बर 23, 2020
परिमार्जित मिति: नोभेम्बर 22, 2020
परिमार्जित मिति: नोभेम्बर 20, 2020